दुईमध्ये कताबाट रेल पहिला ? | suryakhabar.com
Home पु.समाचार दुईमध्ये कताबाट रेल पहिला ?
on: १० जेष्ठ २०७५, बिहीबार १२:२४ In: पु.समाचारTags: दुईमध्ये कताबाट रेल पहिला ?No Comments
काठमाडौं । नेपालमा रेल भित्र्याउन रेल विभागका कर्मचारी ज्यान फालेर लागेका छन् । आमसर्वसाधारणमा चासो र खुल्दुलीको विषय छ– उत्तर र दक्षिणमध्ये कताबाट रेल पहिला भित्रिएला ? जनआस्था साप्ताहिकमा खबर छ । यही जिज्ञासा जनआस्थाकर्मीले रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायसमक्ष राख्यो । तर, उनी यो त राजनीतिक प्रश्न भन्दै हच्किए ।
बरु यसबीच भारतझैं चीनले समेत नेपालमा रेल भिœयाउन दु्रततर गतिमा काम गरिरहेको सुनाए । नोभेम्बरमा चीनको नेशनल रेल्वे एडमिनिस्ट्रेसनका उपमन्त्री चेङ जियान नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोली आयो । उसको अध्ययनको निष्कर्ष थियो, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्भव छ । यही निश्कर्ष बोकेर फर्किएको टोली ५ महिनासम्म ‘टेबुल वर्क’मै सीमित रह्यो । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अब ‘फिल्ड वर्क’मा देखा पर्न लागेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
यस्तो किन भनिएको हो भने १५ गते मात्र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी, सहसचिव केशव शर्मा, राजेन्द्रराज शर्मा, रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य, सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्याय, अमन चित्रकार, परराष्ट्रका अधिकृत चीन पुगेर फर्किएका छन् । ६ दिनसम्म त्यहाँ रहँदा उनीहरूले उपमन्त्री चेङसँग केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन प्रारम्भ गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
यही सम्झौताअनुरूप उताबाट साताभित्र इञ्जिनियरको एउटा टोली नेपाल भित्रिँदै छ भने यताबाट दर्जन इञ्जिनियर तालिम लिन जाँदै छन् । शुक्रबार जाने १२ जनाको टोलीमा रेल विभागका इञ्जिनियर किरण कार्की, विश्व केसीसहित सडक विभागबाट सिडिई शिवलाल दाहाल, सिडिई कृष्णनाथ ओझा, इञ्जिनियर समिना रानाभाट, गागल भण्डारी, आकृति लाखे, सञ्जय पन्थी, श्यामकुमार यादव, मेकानिकल इञ्जिनियर श्रीकान्त यादव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव रामहरि पोखरेल र इञ्जिनियर रिकेश महर्जन छन् ।
Tags: दुईमध्ये कताबाट रेल पहिला ?
बाबुरामले गरे सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो कमेन्ट !
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १२:५६
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०६:३३
१० जेष्ठ २०७५, बिहीबार १२:२४